နေပြည်တော် အာဟာရသုခဈေးတွင် နေပြည်တော်ထွက် ကြက်သွန်နီများ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်၊ တရုတ်ကြက်သွန်? - Yangon Media Group
နေပြည်တော် အာဟာရသုခဈေးတွင် နေပြည်တော်ထွက် ကြက်သွန်နီများ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်၊ တရုတ်ကြက်သွန်?
နေပြည်တော်၊ မေ ၂
နေပြည် တော်ကုန်စိမ်းဈေးကွက်ကို အဓိက ဖြန့်ဖြူးနေသည့် နေပြည်တော်အာ ဟာရသုခဈေးတွင် တရုတ်မှကြက် သွန်နီများနှင့် နေပြည်တော်ဒေသ ထွက်ကြက်သွန်နီများ ဈေးကွက် အပြိုင် ရောင်းဝယ်မှုရှိနေသော် လည်း တရုတ်ကြက်သွန်နီများသည် မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုအပူချိန်ဒဏ် မခံနိုင်သည့်အတွက် အသုံးနည်း လာမှုကြောင့် နေပြည်တော်၌ ဈေး ကွက်ပျောက်နေပြီး ဒေသထွက် ကြက်သွန်နီများသာ အရောင်းအ ဝယ်ဈေးကွက်ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
”ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှာ နေပြည် တော်ဒေသထွက်ကြက်သွန်နီတွေ ပဲအရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်ဖြစ် နေတယ်။ နေပြည်တော်ဒေသထွက် ကြက်သွန်နီနဲ့အတူ ဈေးကွက်ပြိုင် ရှိနေတဲ့ တရုတ်ကြက်သွန်နီတွေရှိတယ်။ တရုတ်ကြက်သွန်နီတွေက ဒေသထွက်ကြက်သွန်နီက ဈေးနှုန်းနဲ့ ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်မရှိဘူး။ တရုတ်ကြက်သွန်နီက မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုရဲ့ အပူချိန်မခံနိုင်တော့ အခု တရုတ်ကြက်သွန်နီ အသုံး နည်းလာတာကြောင့် ဈေးကွက်ပျက်နေတယ်”ဟု နေပြည်တော် အာဟာရသုခဈေးမှ ပွဲရုံလုပ်ငန်း ရှင်ဦးကြည်လင်းက ဧပြီ ၃ဝ ရက် တွင် ပြောသည်။
နေပြည်တော်ဒေသ သိုက် ချောင်း၊ တပ်ကုန်း၊ လယ်ဝေး၊
ဧလာ စသည့် ကြက်သွန်စိုက်တောင်သူများ၏ ဒေသထွက်ကြက်သွန်များကို ဧပြီလနောက်ပိုင်း နေပြည် တော်အာဟာရသုခကုန်စိမ်းဈေးသို့ နေ့စဉ်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီး နေ့စဉ် ကြက်သွန်ကုန်တန်ချိန်ဝင်ရောက်ပိဿာ ကုန်ချိန်ခန့်မှန်းပြောဆို၍မရနိုင် ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဘုရင့်နောင်ဈေး မှာလို ဈေးဝင်၊ ထွက်ပေါက်ဂိတ် တွေမှာဝင်လာတဲ့ ကုန်တင်မော် တော်ယာဉ်ကြီးတွေ၊ စာရင်းမှတ် တမ်းကောက်ယူတာမျိုးတွေ နေ ပြည်တော်အာဟာရသုခဈေးမှာ မရှိတဲ့အတွက် နေပြည်တော် အာဟာရသုခဈေးမှာ နေ့စဉ် ကြက်သွန်နီ ကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက် ဝင်ရောက်မှု ကုန်တန်ချိန် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းပြောဖို့ခက်တယ်”ဟု ¤င်းကပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ နေပြည်တော် ဈေးကွက်သို့ မြင်းခြံ၊ တောင်သာ၊ မိတ္ထီလာဒေသထွက် ကြက်သွန်နီများ ဝင်ရောက်လာမှုများရှိသော်လည်း ယင်းဒေသထွက်ကြက်သွန်နီများက ဈေးမြင့်သည့်အတွက် နေ ပြည်တော်ဒေသထွက်ကြက်သွန်နီ များသာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး ဒေသထွက်ကြက်သွန်နီနှင့် တရုတ် ကြက်သွန်နီဈေးကွက်သည် ပွဲရုံ ဈေး (လက်ကားဈေး) တစ်ပိဿာ ကျပ် ၄ဝဝ၊ ၅ဝဝ ဈေးရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြား ဝယ်လိုအား ပိုမိုကောင်းလာသည့် ဗမာပဲပုပ်များ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၈၆ဝဝဝ အထိ ဈေးမြင?
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် Global English သင်တန်း (၂/၂ဝ၁ ) ယခုလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည်
စတုတ္ထမြောက်ဇနီးနှင့်လက်ထပ်ပြီး လေးရက်အကြာတွင် လက်ထပ်မှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျက်ပေးရန် နီကိုးလတ်??
တရုတ်နိုင်ငံ Tient Group နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တရုတ်ကုန်သည်များ အသင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ ပြည်တွင်း၌ စီး??
မိုဒယ်မြင့်ပြီး မောင်းနှင်ခွင့် ရနေသေးသော်လည်း စုတ်ချာနေပါက ဖျက်သိမ်းသွားမည် ဟု ရန်ကုန်တု
ကျပ် တစ်သောင်းတန် အတု ၂၅ ရွက်ကို ကျပ်တစ်သိန်းဖြင့် ဝယ်လာသူ ငွေအတုများနှင့် အတူ ပဲခူးတွင် ဖမ??
ရွှေဘိုဒေသရှိ မိုးစပါးများ စတင်ရိတ်သိမ်း၊ စပါး အထွက်ကောင်း၍ ဈေးကောင်းရ